२६ वर्षीय यी सुन्दरीलाई रक्सीकी रानीको ताज | Glamour Nepal
२६ वर्षीय सिरियाली शरणार्थी छात्राले जर्मनीमा रक्सीकी रानीको ताज पहिरिएकी छिन्। जर्मनीको सबैभन्दा राम्रो मदिरा उत्पादन गर्ने एक क्षेत्रमा उनलाई यस्तो उपाधि प्रदान गरिएको हो। पहिलो पटक कुनैपनि शरणार्थीलाई यस्तो ताज प्राप्त भएको बताइएको छ। गत वर्ष जर्मनीमा १० लाख भनदा बढि शरणार्थी भित्रिएका थिए जसमध्ये अधिकांस सिरियाली शरणार्थी थिए।
रिपोर्ट अनुसार यसरी जर्मनीमा रक्सी रानीको उपाधि पाउने यी युवतीको नाम निनोरटा बहनो हो। उनी सिरियामा चलेको गृहयुद्धका कारण तिन वर्ष पहिले भागेर जर्मनीमा गई शरण लिएकी थिइन्।
लक्जेम्बर्गको सिमानामा रहेको पश्चिमी जर्मन शहर टि्रयरमा सिरियाली इसाइ धर्मावलम्बी निनोरटाले हालै यस्तो रक्सीकी रानीको उपाधि पाइन्। यस्तो उपाधिले समाजमा एकिकरणलाई प्रोत्साहित गर्ने उनको भनाई छ।
जर्मनहरु निकै खुल्ला हृदयका हुन्छन् र जर्मनी हरेकलाई स्वागत गर्ने देश हो भन्ने कुरा आफुले देखाउन चाहेको भन्दै उनले जर्मनहरु शरणार्थीहरुलाई सफलतापूर्वक तथा शिघ्र रुपमा समाजमा एकिकरण गर्नमा काम गरिरहेको उनले बताएकी छिन्। शरणार्थीहरुलाई नयाँ समाजमा घुलमेल हुन निकै गाह्रो हुने उनको अनुभव छ।
अब उनले आगामी वर्ष हुने टि्रएर उत्सवमा रक्सी उत्पादकहरुको प्रतिनिधित्व गर्नेछिन्। उनले स्थानीय रक्सी बनाउने छोटो समयको तालीम पनि लिएकी छिन्। आफ्नो सबैभन्दा मनपर्ने वाइनको ब्राण्ड राइजलिङ रहेको उनले बताएकी छिन्।
स्मरण रहोस् जर्मनीमा रक्सीकी रानी उपाधि प्रदान गर्ने परम्परा सन् १९३० देखि नै चलिरहेको छ। जर्मनीमा हरेक वर्ष सेप्टेम्बरमा विभिन्न १३ इलाकाहरुबाट निनोरटाजस्तै रक्सी रानीहरु जर्मन रक्सी रानीको उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दछन्।
राजधानीकै एक दम्पतीको यौन भिडियो बाहिरिएपछि….
तिमि बिनाको जीवन ! – कल्पना पौडेल...
महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको स्थापनार्थ...